Athpahariya Dictionary » Search Results » बारा हाम्‍मा
Search results for "बारा हाम्‍मा"
बारा हाम्‍मा [bara ham‍ma] क्रि. प. बार बार्नु to fense (sem. domains: 6.2.4 - खेतको रेखदेख गर्नु.)
छाक्‍मा [tsʰak‍ma] क्रि. 1थुन्‍नु imprison, lock up, shut, lock, close, stop up
होङ्‌ङिना चुवा कुलालेङ्‌ चोक्मा छाक्‍मा कोन्‌युक्‌॥ खोलाको पानी कुल तिर बनाउनु थुन्‍नु पर्छ। (sem. domains: 4.4.4.4 - संकटदेखि बचाउनु, 3.4.2.1.4 - निराश भएको, 4.3.4.2.1 - बाधा दिनु, 7.2.7.1 - चल्‍न छोड्‌नु.) 2बन्‍द गर्नु to close, to shut ना लाम्‍बो याप्‌मिचि ओलाम्‌टिनिलोक्‌ बारा हाम्‍माउङ्‌ छाक्‍मा कोन्‌युक्‌॥ यो बाटो मानिसहरू नहिँड्‌ने गरी बार बारेर बन्‍द गर्नु पर्छ। (sem. domains: 3.4.2.1.4 - निराश भएको, 6.5.2.3 - तला, 4.3.4.2.1 - बाधा दिनु.) 3रोक्‍नु to stop, to prevent, to hinder, to obstruct, to shut
(sem. domains: 8.4.7.1 - हस्‍तक्षेप गर्नु, 8.4.6.1.2 - रोक्‍नु, अन्‍त्‍य, 3.4.2.1.4 - निराश भएको, 8.4.5.3.4 - ढिलाइ, 4.3.4.2.1 - बाधा दिनु.) 4छेक्‍नु to come between, to hinder, to prevent, to obstruct
लाम्‍बो छाक्‍मा आनि आठपहरिया छोङ्‌चिगा ठिक्‌ चालान ए॥ बाटो छेक्‍नु हामी आठपहरिया जातीहरूको एउटा चलन हो। (sem. domains: 8.4.7.1 - हस्‍तक्षेप गर्नु.) 5ताछ्‍नु peel, strip off, scrape
फेन्‌डिक्ङा हालो छाक्‍मा कोन्‌युक्‌॥ बन्‍चरोले हलो ताछ्‌नु पर्छ। (sem. domains: 7.7.7 - निशाना लाउनु, 3.4.2.1.4 - निराश भएको, 4.3.4.2.1 - बाधा दिनु.)